ကွန်ပျူတာမှ RAM အကြောင်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > ကွန်ပျူတာမှ RAM အကြောင်း
ကွန်ပျူတာမှ RAM အကြောင်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:10 AM ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ RAM ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်…RAM ဟာ CPU နှင့် Hard disk ကြားမှာ တံတား သဖွယ်ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်..RAM ဟာ Volatile memory အမျိုးအစားဖြစ် တယ် ..ကွန်ပျူတာ အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ Data တွေကိုယာယီမျှသာထိမ်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီး..power off သွား ရင်တော့ သူ့ မှာ ထိမ်းသိမ်းနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး..ဟုတ်ပြီ..ဒါဆို ဒီလိုအရေးပါတဲ့ RAM တစ်ခု ကွန်ပျူတာမှာ RAM မကောင်း တော့ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ် လာမလဲ ဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်..
အောက်ပါအကြောင့်အရင်းများကြောင့် RAM များပျက်စီးနိုင်သည်…
1.Electro static Discharge (ESD)
လူ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ electro static charge တွေရှိတယ်....ခုနောက်ပိုင်းလာတဲ့ computer electronic device တွေဟာ volt အားကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်..Volt အားများရင် heat တွေများများထွက်မယ် heat တွေများများထွက်ရင် electronic devices တွေတာရှည်မခံပဲ လောင်ကျွမ်း ပျက်စီး မှာဖြစ်ပါတယ်..ဒါကြောင့် volt အားကို micro volt (or) mili volt လောက်ပဲထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဆိုရင် လူခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့heat နဲ့ ထိတွေ လိုက်ရင်မခံနိုင်ပါဘူး..လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါ တယ်..ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းက ပစ္စည်းကိုင်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိလက်ကို casing အဖုံးလေးနဲ့ ခနမျှပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် heat တွေကို Discharge လုပ်ခိုင်းတာပေါ့..အခုလဲ RAM အကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM ကို သေချာ မြင်ဖူးကိုင်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်သိပါလိမ့် မယ်.. မတွေ့ ဖူးမမြင်ဖူးရင်တောင်အထက်ကပုံမှာလေ့လာနိုင်တယ် RAM မှာ IC chip အသေးလေးတွေပါတယ်..RAM တစ်ခုနဲ့တစ်ခု chip တွေရဲ့အရွယ်အစား ကတူ ချင်မှ တူလိမ့် မယ် ..အဲဒီ chip အပြားလေးတွေကို လက်နဲ့ မထိမကိုင်မိစေနဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကနေခွကိုင်ပါ.. သတိထားပြီး ကိုင်ပါ..အားကစားလုပ်တတ်တဲ့သူတွေ ဆိုရင် ပိုသတိထားရမယ် အားကစားလုပ်ပြီးလို့ စက်ထဲက ပစ္စည်းကို ကလိတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်သင့် တယ်...စောနကပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့static charge က RAM ရဲ့ chip ပြားလေးတွေကို သွားထိမိရင် လောင်သွားနိုင်ပါတယ်..အဲလိုလောင်သွားရင်ပုံမှန်အခြေအနေတိုင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး..ဒါဆိုရင် ESD ကြောင့် RAM ပျက်စီးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်..RAM ကိုဖြုတ်တပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ အပူနဲ့ လွတ်ရာကင်း ရာ မှာ ပြုလုပ်ပါ..
RAM stick လေးတွေကို ဈေးကွက်ထဲကို အရည်သွေးစစ်ပြီးရောင်းချလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုး RAM ၀ယ်လာပြီးတော့ အဆင်မပြေမှုတွေ ၀ယ်ထား တာမကြာသေးပဲ စက်က hang ပြီး restart ကျသွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံဖူးကြမှာ ပါ…စက်ရုံကထုတ်လိုက်ကတည်းက ထောင်သောင်းမက ထုတ်လိုက်တာဆို တော့ အနည်းနဲ့အများချွတ်ယွင်း မှုလေးတွေတော့ရှိမှာပါ..ဒါကြောင့်တစ်ခါတရံ RAM ချောင်းအသစ်ကို ပဲသုံးလို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ်..RAM ချို့ယွင်းမှုဖြစ်လို့Default industry ကဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်..အကယ်၍ မိမိက ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်လုံးဆင် လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် RAM အသစ်တစ်ချောင်းဝယ်စိုက်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ရင် မိမိဝယ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်က အာမခံသက် တမ်း (warranty)ပေး တာဖြစ်တဲ့ အတွက်ဆိုင်မှာ လှဲလှယ်နိုင်ပါတယ်..
Enviroment ကြောင့်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာကတော့ RAM failure ဖြစ်ဖို့ အခြေအနေအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်..RAM ကို အပူနဲ့ နီးစပ်တဲ့ နေရာမှာထားရှိခြင်း ရေခိုးရေငွေ့ နဲ့ နီးစပ်တဲ့နေရာနဲ့ ထိတွေ့ မှုရှိခြင်း ..သဘာဝအလျောက် ထိမိခိုက်မိပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..ဒါကြောင့် RAM ပျက်စီးမှုထဲမှာ environment လဲတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်
RAM တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်..အမျိုးစားချင်းတူပေမဲ့ ဈေးနည်းတာနဲ့ ဈေးများတာ ကွာပါတယ် ဘာကြောင့်အဲလိုကွာတာလဲ.. Architecture တွေ…ထုတ်လုတ်တဲ့ ပစ္စည်း အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ကွာလို့ ဈေးနှုန်း တွေကွာခြားသွားခြင်းဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ် ဘယ်ဟာပိုသာတယ်ဆိုတာမပြောတော့ ဘူးနော် သူ့ အမျိုးစားနဲ့ သူတော့ အဆင်ပြေကြမှာပါ..
RAM ပျက်ရင် ဘာ error တွေပြမှာလဲ
RAM ပျက်ရင် monitor screen မှာ motherboard မှ error beep sound ထုတ်ပေးပါတယ်..နောက် BSOD လို့ ခေါ်တဲ့blue screen အပြာတက် လာပြီး တော့ RAM failure ဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့error message ပြတယ်..technical information code နံပါတ်တွေနဲ့ လည်းဖော်ပြပါတယ်..RAM ချောင်းတွေဟာ လုံးဝမကောင်းတော့တာတွေရှိသလို သုံးပြီးတစ်နာရီ နှစ် နာရီလောက်နေပြီးမှ စက်က ထိုးရပ်သွားခြင်း (သို့ )စက်က restart ကျသွားခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်..virus ကြောင့်မဟုတ်ပဲ စက်ကို ခနလောက်ပဲသုံးရသေးတယ် စက်ကလေးလံပြီး စက်ဟန်းသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်..RAM ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သံသယရှိရင် အခြား ကောင်းတဲ့RAM နဲ့ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်စမ်းသပ်ကြည့်ပါ..အခြား RAM နဲ့ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ကြည့်လိုက်လို့ စက်က အကောင်းပကတိ အတိုင်းအလုပ်လုပ် နေတယ်ဆိုရင် မိမိ RAM မကောင်းတော့ပါ ပိုပြီးသေချာစေရန် စောနကမကောင်းတော့ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိမိ RAM ကိုပဲအခြားစက်တစ်လုံးမှာတပ်ဆင် ကြည့်ပါ..အခြားစက်တစ်လုံးမှာလဲ ပထမစက်မှာဖြစ်သကဲ့ သို့ ပုံစံတူ error ပြနေလျင် RAM ပျက်ပြီဟုတ်မှတ်ယူနိုင်သည်..
အလွယ်ဆုံးကတော့ RAM ကိုဖြုတ်ပြီးတခြားဟာနဲ့ အစားထိုးစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် သို့ သော်လည်းအပိုရှိဦးမှကိုး..Physically အရ RAM ကို slot မှာသေသေချာချာ ထိထိမိမိစိုက်ထားရဲ့ လားဆိုတာ ပြန်စစ်ပေးရပါတယ်..တစ်ခါတရံ slot အံမကျလို့ sound beep error ထုတ်ပေးတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်.. အံကျအောင်ပြန်စိုက်ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ် မိမိက သေချာစိုက်ထားသော်လည်း RAM အောက်ခြေမှာ ဖုံတွေ၊ ချည်းတွေ ကပ်နေတဲ့အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲဒီအခါကျရင် RAM ချောင်းရဲ့ အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ေ၇ွရောင်လိုင်းလေးတွေကို တစ်ရှူးအနုလေးဖြင့် သန့် ရှင်းပေးခြင်းအား ဖြင့်လည်းအဆင်ပြေသွားနိင်ပါတယ်... #ကွန်ပျူတာ ပညာဒါန
ကှနျပြူတာမှ RAM အကွောငျး
[Unicode]ဖတျရနျ ကှနျပြူတာတဈလုံးမှာ RAM ဟာမရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ…RAM ဟာ CPU နှငျ့ Hard disk ကွားမှာ တံတား သဖှယျပေါငျးကူးဆောငျရှကျပေးပါတယျ..RAM ဟာ Volatile memory အမြိုးအစားဖွဈ တယျ ..ကှနျပြူတာ အလုပျလုပျနစေဉျအတှငျးမှာ Data တှကေိုယာယီမြှသာထိမျးသိမျးထားတာဖွဈပွီး..power off သှား ရငျတော့ သူ့ မှာ ထိမျးသိမျးနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး..ဟုတျပွီ..ဒါဆို ဒီလိုအရေးပါတဲ့ RAM တဈခု ကှနျပြူတာမှာ RAM မကောငျး တော့ဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုတှဖွေဈ လာမလဲ ဆိုတာလလေ့ာကွညျ့ရအောငျ..
အောကျပါအကွောငျ့အရငျးမြားကွောငျ့ RAM မြားပကျြစီးနိုငျသညျ…
လူ ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ electro static charge တှရှေိတယျ....ခုနောကျပိုငျးလာတဲ့ computer electronic device တှဟော volt အားကိုနညျးနိုငျသမြှနညျးအောငျ ပွုလုပျတတျကွပါတယျ..Volt အားမြားရငျ heat တှမြေားမြားထှကျမယျ heat တှမြေားမြားထှကျရငျ electronic devices တှတောရှညျမခံပဲ လောငျကြှမျး ပကျြစီး မှာဖွဈပါတယျ..ဒါကွောငျ့ volt အားကို micro volt (or) mili volt လောကျပဲထုတျထားတဲ့ပစ်စညျးတှေ ဆိုရငျ လူခန်ဓာကိုယျက ထှကျတဲ့heat နဲ့ ထိတှေ လိုကျရငျမခံနိုငျပါဘူး..လောငျကြှမျးနိုငျပါ တယျ..ဒါကွောငျ့ ကှနျပြူတာအတှငျးက ပစ်စညျးကိုငျတော့မယျဆိုရငျ မိမိလကျကို casing အဖုံးလေးနဲ့ ခနမြှပှတျပေးခွငျးဖွငျ့ heat တှကေို Discharge လုပျခိုငျးတာပေါ့..အခုလဲ RAM အကွောငျးကိုပွောနတောဖွဈတဲ့အတှကျ RAM ကို သခြော မွငျဖူးကိုငျဖူးတဲ့သူတှဆေိုရငျသိပါလိမျ့ မယျ.. မတှေ့ ဖူးမမွငျဖူးရငျတောငျအထကျကပုံမှာလလေ့ာနိုငျတယျ RAM မှာ IC chip အသေးလေးတှပေါတယျ..RAM တဈခုနဲ့တဈခု chip တှရေဲ့အရှယျအစား ကတူ ခငျြမှ တူလိမျ့ မယျ ..အဲဒီ chip အပွားလေးတှကေို လကျနဲ့ မထိမကိုငျမိစနေဲ့ဘေးနှဈဖကျကနခှေကိုငျပါ.. သတိထားပွီး ကိုငျပါ..အားကစားလုပျတတျတဲ့သူတှေ ဆိုရငျ ပိုသတိထားရမယျ အားကစားလုပျပွီးလို့ စကျထဲက ပစ်စညျးကို ကလိတာမြိုး ရှောငျကွဉျသငျ့ တယျ...စောနကပွောတဲ့ခန်ဓာကိုယျကထှကျတဲ့static charge က RAM ရဲ့ chip ပွားလေးတှကေို သှားထိမိရငျ လောငျသှားနိုငျပါတယျ..အဲလိုလောငျသှားရငျပုံမှနျအခွအေနတေိုငျး အလုပျမလုပျနိုငျတော့ပါဘူး..ဒါဆိုရငျ ESD ကွောငျ့ RAM ပကျြစီးတယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ..RAM ကိုဖွုတျတပျလုပျတဲ့အခါမှာလဲ အပူနဲ့ လှတျရာကငျး ရာ မှာ ပွုလုပျပါ..
RAM stick လေးတှကေို စြေးကှကျထဲကို အရညျသှေးစဈပွီးရောငျးခလြိုကျတယျဆိုပမေဲ့အကွောငျးအမြိုးမြိုး RAM ၀ယျလာပွီးတော့ အဆငျမပွမှေုတှေ ၀ယျထား တာမကွာသေးပဲ စကျက hang ပွီး restart ကသြှားတာမြိုးတှလေညျးကွုံဖူးကွမှာ ပါ…စကျရုံကထုတျလိုကျကတညျးက ထောငျသောငျးမက ထုတျလိုကျတာဆို တော့ အနညျးနဲ့အမြားခြှတျယှငျး မှုလေးတှတေော့ရှိမှာပါ..ဒါကွောငျ့တဈခါတရံ RAM ခြောငျးအသဈကို ပဲသုံးလို့မရဖွဈတတျပါတယျ..RAM ခြို့ယှငျးမှုဖွဈလို့Default industry ကဖွဈတယျလို့မှတျယူနိုငျပါတယျ..အကယျ၍ မိမိက ကှနျပြူတာအသဈတဈလုံးဆငျ လို့ ပဲဖွဈဖွဈ RAM အသဈတဈခြောငျးဝယျစိုကျလို့ ပဲဖွဈဖွဈ ဒီလိုဖွဈလာခဲ့ရငျ မိမိဝယျခဲ့တဲ့ ဆိုငျက အာမခံသကျ တမျး (warranty)ပေး တာဖွဈတဲ့ အတှကျဆိုငျမှာ လှဲလှယျနိုငျပါတယျ..
Enviroment ကွောငျ့ပကျြစီးတယျဆိုတာကတော့ RAM failure ဖွဈဖို့ အခွအေနအေားလုံးအကြုံးဝငျပါတယျ..RAM ကို အပူနဲ့ နီးစပျတဲ့ နရောမှာထားရှိခွငျး ရခေိုးရငှေေ့ နဲ့ နီးစပျတဲ့နရောနဲ့ ထိတှေ့ မှုရှိခွငျး ..သဘာဝအလြောကျ ထိမိခိုကျမိပကျြစီးခွငျးမြား ဖွဈနိုငျပါတယျ..ဒါကွောငျ့ RAM ပကျြစီးမှုထဲမှာ environment လဲတဈခုအဖွဈပါဝငျတာဖွဈပါတယျ
RAM တှကေိုထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီတှအေမြိုးမြိုးရှိကွတယျ..အမြိုးစားခငျြးတူပမေဲ့ စြေးနညျးတာနဲ့ စြေးမြားတာ ကှာပါတယျ ဘာကွောငျ့အဲလိုကှာတာလဲ.. Architecture တှေ…ထုတျလုတျတဲ့ ပစ်စညျး အသုံးပွုထားတဲ့ပစ်စညျးတှေ ကှာလို့ စြေးနှုနျး တှကှောခွားသှားခွငျးဖွဈတယျ ဒီနရောမှာ ဘယျဟာပိုကောငျးတယျ ဘယျဟာပိုသာတယျဆိုတာမပွောတော့ ဘူးနျော သူ့ အမြိုးစားနဲ့ သူတော့ အဆငျပွကွေမှာပါ..
RAM ပကျြရငျ ဘာ error တှပွေမှာလဲ
RAM ပကျြရငျ monitor screen မှာ motherboard မှ error beep sound ထုတျပေးပါတယျ..နောကျ BSOD လို့ ချေါတဲ့blue screen အပွာတကျ လာပွီး တော့ RAM failure ဖွဈကွောငျးပွတဲ့error message ပွတယျ..technical information code နံပါတျတှနေဲ့ လညျးဖျောပွပါတယျ..RAM ခြောငျးတှဟော လုံးဝမကောငျးတော့တာတှရှေိသလို သုံးပွီးတဈနာရီ နှဈ နာရီလောကျနပွေီးမှ စကျက ထိုးရပျသှားခွငျး (သို့ )စကျက restart ကသြှားခွငျး ဖွဈတတျပါတယျ..virus ကွောငျ့မဟုတျပဲ စကျကို ခနလောကျပဲသုံးရသေးတယျ စကျကလေးလံပွီး စကျဟနျးသှားတာမြိုးလညျးဖွဈတတျပါတယျ..RAM ကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ သံသယရှိရငျ အခွား ကောငျးတဲ့RAM နဲ့ ပွောငျးလဲတပျဆငျစမျးသပျကွညျ့ပါ..အခွား RAM နဲ့ ပွောငျးလဲတပျဆငျကွညျ့လိုကျလို့ စကျက အကောငျးပကတိ အတိုငျးအလုပျလုပျ နတေယျဆိုရငျ မိမိ RAM မကောငျးတော့ပါ ပိုပွီးသခြောစရေနျ စောနကမကောငျးတော့ဘူးလို့ သတျမှတျထားတဲ့ မိမိ RAM ကိုပဲအခွားစကျတဈလုံးမှာတပျဆငျ ကွညျ့ပါ..အခွားစကျတဈလုံးမှာလဲ ပထမစကျမှာဖွဈသကဲ့ သို့ ပုံစံတူ error ပွနလေငျြ RAM ပကျြပွီဟုတျမှတျယူနိုငျသညျ..
အလှယျဆုံးကတော့ RAM ကိုဖွုတျပွီးတခွားဟာနဲ့ အစားထိုးစမျးသပျခွငျးဖွဈပါတယျ သို့ သျောလညျးအပိုရှိဦးမှကိုး..Physically အရ RAM ကို slot မှာသသေခြောခြာ ထိထိမိမိစိုကျထားရဲ့ လားဆိုတာ ပွနျစဈပေးရပါတယျ..တဈခါတရံ slot အံမကလြို့ sound beep error ထုတျပေးတာမြိုးလဲ ဖွဈနိုငျတယျ.. အံကအြောငျပွနျစိုကျပေးလိုကျရငျအဆငျပွသှေားနိုငျပါတယျ မိမိက သခြောစိုကျထားသျောလညျး RAM အောကျခွမှော ဖုံတှေ၊ ခညျြးတှေ ကပျနတေဲ့အတှကျ အဆငျမပွဖွေဈတတျပါတယျ အဲဒီအခါကရြငျ RAM ခြောငျးရဲ့ အောကျခွမှောရှိတဲ့ ရှရေောငျလိုငျးလေးတှကေို တဈရှူးအနုလေးဖွငျ့ သနျ့ ရှငျးပေးခွငျးအား ဖွငျ့လညျးအဆငျပွသှေားနိငျပါတယျ... #ကှနျပြူတာ ပညာဒါန
ကွန်ပျူတာမှ RAM အကြောင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:10 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ RAM ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်…RAM ဟာ CPU နှင့် Hard disk ကြားမှာ တံတား သဖွယ်ပေါင်းကူးဆောင်ရွက်ပေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:10 AM